वर्षा र शीतका थोपाहरू किन गोलो हुन्छन् ? « Lokpath
वर्षा र शीतका थोपाहरू किन गोलो हुन्छन् ?
काठमाडौं । संसारमा हाम्रो वरिपरि धेरै घटनाहरू हुन्छन्, तर हामीलाई धेरै कुरा थाहा हुँदैन । हामी सबैले बाल्यकालदेखि नै वर्षा र शीतको थोपा देख्दै आएका छौं । तर पानी र शीतको थोपा किन गोलो हुन्छ ?
आउनुहोस् जानौँ किन वर्षा र शीतका थोपाहरू गोलाकार हुन्छन् :
तपाईँले आफ्नो बाल्यकालमा भौतिकशास्त्र पढ्नुभयो होला, तपाईँलाई सतह प्रेसरको बारेमा सिकाइएको हुनुपर्छ, तर यसको पछाडिको वैज्ञानिक कारण भने अर्कै छ । । वर्षाको थोपा गोलो हुनुको वैज्ञानिक कारण पनि छ ।
सतह प्रेसरका कारण पानीका थोपाहरू गोलाकार हुन्छन्। तैपनि तपाईँको मनमा यो प्रश्न उठिरहेको हुनुपर्छ कि वर्षाका थोपा किन गोलो हुन्छ ? जब पानीका थोपाहरू स्वतन्त्र रूपमा खस्छन्, तिनीहरूले न्यूनतम आकार प्राप्त गर्ने प्रयास गर्छन्।
गुरुत्वाकर्षणका कारण सबैभन्दा सानो आकार गोलाकार हुन्छ । पानीका थोपाहरू साना हुँदै जाँदा तिनीहरूले गोलाकार आकार लिन्छन्। गोलाकार आकारको क्षेत्रफल सबैभन्दा कम हुन्छ, जसका कारण वर्षाका थोपाहरू गोलाकार हुन्छन्।
वर्षाबाहेक कुनै पनि तरल पदार्थ पृथ्वीको नजिक आउँदा थोपाको रुप लिन्छ । सतहको प्रेसरका कारण, थोपाहरू गोलाकार हुने गर्दछन् ।
प्रकाशित मिति: २०७८,मङ्सिर,४,शनिवार ११:०८